Imaarada Islaamiga Afghanistan Oo Si Buuxda Ula Wareegtay Gacan Ku Heynta Magaalada Sangin. – Calamada.com
Imaarada Islaamiga Afghanistan Oo Si Buuxda Ula Wareegtay Gacan Ku Heynta Magaalada Sangin.
calamada March 23, 2017 1 min read
Wararka ka imaanaya dalka Afghanistan ayaa sheegaya in saacadihii lasoo dhaafay ciidamada Mujaahidiinta Imaarada Islaamiga ah ee Afghanistan hormaro ballaaran ka sameeyeen gobalka Helmand oo dhaca Konfurta dalkaasi.
Ciidamada Mujaahidiinta ayaa si buuxda ula wareegay gacan ku heynta degmada Sangin oo ah magaalada istiraatiiji ah kana mid ah magaalooyinka ugu waaweyn gobalka Helmand.
Maleeshiyaatka maamulka daba dhilifka fadhigiisu yahay magaalada Kaabul oo muddo Bil ah ku go’doonsanaay magaalada ayaa habeenkii xalay ku baxsaday diyaarado Eelecobtar ah kuwaasi oo u daabulay dhanka magaalada Kaabul.
Diyaaradaha dowlada Nasaarada Mareykanka iyo kuwa maamulka Kaabul ayaa duqeyman arxan daro ah u geystay magaalada kuwaasi oo hadafkoodu ahaa iney burburiyaan gaadiidkii dagaalka iyo hubkii maleeshiyaatka diyaaradaha lagu daabulay kaga carareen magaaladaasi.
Ciidamada Mujaahidiinta Imaarada Islaamiga ah ee Afghanistan ayaa dagaal la’aan kula wareegay gacan ku heynta magaalada Sangin’waxeyna gacanta ku dhigeen gaadiid dagaal iyo hub ka badbaaday duqeynta diyaaradaha Mareykanka iyo kuwa daba dhilifka ka geysteen magaaladaasi.
Webseydka Imaarada Islaamiga ah ee Afghanistan ayaa baahiyay in ciidamada Mujaahidiinta gacanta ku dhigeen (77) Todobaatan iyo Todobo gaari oo isugu jira gaadiidka noocyadiisa kala duwan’waxey sidoo kale gacanta ku dhigeen Todobo Matoor iyo Keyd buuxa oo hubka noocyadiisa kala duwan ah.
Bil ka hor ayeey aheed markii weerar culus oo ciidamada Mujaahidiinta ku qaadeen magaalada Sangin ay ku dileen inka badan Boqol askari oo ka tirsan maleeshiyaatka maamulka daba dhilifka dalka Afghanistan.
Halkan Ka Doono Warbixinta Webka Imaarada Islaamiga Afghanistan.
Previous: Halkan Ka Dhageyso Barnaamijka Caalamulyowm 24-06-1438 Hijri.
Next: Halkan Ka Dhageyso Faafreebka Wararka 25-06-1438Hijri.